China Quality Polypeptide Antibiotics Enramycin mpanamboatra sy mpamatsy | Senton
Ctoy ny Tsia: 1115-82-5
Lanjan'ny Formula:2355.30 g / mol
Panarana roduct: Enramycin
Fonosana: 25KG / Amponga, na toy ny fitakiana Custimised.
Famokarana: 1000tona / volana
Kaody HS: 2925190024
Seranan-tsambo: Shanghai ， Qingdao ， Tianjin
Enramycin dia karazana antibiotika polypeptide izay misy asidra matavy tsy miangona sy asidra amina am-polony. Novokarin'i Streptomycesfungicides.Enramycin dia nankatoavina mba ho ampiana amin'ny sakafo ho an'ny fampiasana maharitra an'ny departemantan'ny fambolena amin'ny taona 1993, noho ny fiarovana azy sy amin'ny lafiny lehibe manana hery fanoherana mahery vaika mahery vaika amin'ny bakteria miabo gram-positives, ny mekanisma fanoherana ny bakteria dia manakana ny tsy fitovizan'ny rindrin'ny sela bakteria. Izy io dia manana hetsika bakteria mahery manohitra ny Clostridium manimba ao amin'ny tsinay, Staphylococcus aureus, Streptococcus sns.
Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny Synergist Saddle,Dinotefuran Vovoka,fanafody famonoana bibikely Acetamiprid Methomyl,Imidacloprid Vovoka,Hetsika fifandraisan'ny King Quenson Famonoana bibikely sy ny sisa.
Mitady karazana mpanamboatra sy mpamatsy antibiotika polypeptide? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny vokatra novokarin'i Streptomyces Fungicides dia azo antoka avokoa. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina mahomby amin'ny fanoherana ny bakteria. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Enramycin miaraka amin'ny fampisehoana sakafo tsara ...
Asidra Aminomethyl Benzoic avo lenta
Synthetic Pyrethroid bibikely Pyrethroid Imi ...
Inona ny Permethrin?